FBC - Waa’ee Faanaa
Waa’ee Faanaa (1)
Waldaa aksiyoona Faanaa Biroodkaastiing Korporeet
Buufanni keenya bara 1987 wayita hundeeffamu meeshaalee duubatti hafaafi humna Namaa muraasaan miidiyaa biroodkaastii biyya keenyaakeessatti akkaataa haarawaan hojii eegale.Adeemsaanis ijaaramaafi qabiyyee sagantaa isaa fooyyessuudhaaniifi rakkoolee mudatanittis fala argamsiisuudhaan imalsaa itti fufe. Sagantaawwan dhimma hawaasaarratti xiyyeeffatan dhiyeessuun kan beekamuufi dameewwan siyaasaafi hawaas-diinagdeerratti fooyya’uumsa jireenyaatiif ciminaan kan carraaqu buufanni keenya yeroodhaa gara yerootti dhaggeeffattootaafi qaamolee wal ta’uumsa taasisan heddummeessuudhaan miidiyaa dhaga’amtummaa qabu ta’aa jira.
Dhaabbanni keenya humna Namaa barateen ijaaramuudhaan teeknooloojii hamayaa’aatti fayyadamuun hojii barsiisuu beeksisuufi bashannansiisuu cimsee itti fufuudhaan miidiyaa biyya keeyaa keessatti jijjiirama galmeessisuun itti fufeera. Finfinneedhaan ala miidiyaa Biroodkaastii 11n garaa garummaa uumuun seenaa miidiyaa biyya keenyaa keessatti haala saffisaafi ajaa’ibsiisaa ta’een Magaalaa Finfinneetiin ala Raadiyoowwan FM 11 hundeessuun humna Namaa gahaafi Teeknooloojii Raadiyoo guutuudhaan qindoominaan hojjechuu danda’eera.Wayita ammaa sadarkaa guutuu biyyaatiin buufatawwan Raadiyoo Fm 12 hundeessuun hojjechaa jira.
Seenaa biyya keenyaa keessatti Darbii Gamoo 11 qabu kan hojii miidiyaatiif mijaa’aa ta’e ijaaruudhaan hojjechaa kan jiru yammuu ta’u wayita ammaa biyya keenyarra darbuudhaan Afrikaa bahaatti dhaabbata miidiya adda duree ta’uuf mul’ata qabate milkeessuudhaaf baatii Amajjii bara 2003 irraa eegalee gara Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti jijjiramuudhaan carraaqaa jira.
Yeroo gabaabaa keessatti buufatawwan Fm gara 20 geessisuuffi tamsaasa Televizyinii eegaluuf hojjechaa jira.
Milkaa’ina kana hundaaf shoorri wal taatotaafi dhaggeeffattoota keenyaa ol’aanaa akka ta’e kan amanu dhaabbanni keenya wayita ammaa jiddu galatti hojjettota 360 Naannoleetti ammoo hojjettoota 304 walumaagalatti hojjettoota 664 qabachuun aantummaa Ummataa qabtee hojjechaa jira.
Torbanitti sa’aatii 38 tamsaasa biyyaleessa dhiyeessuurraa eegalee wayita ammaa sadarkaa guutuu biyyaafi buufatawwan Fm hundaan tokkoon tokkoon isaaniitiin sa’aatii 18 tamsaasa.
Mul’ata: Itiyoophiyaafi Afrikaatti miidiyaa daldalaa adda duree yoomiyyuu filatamu ta’uu
Ergama:Tajaajila miidiyaa qulqullina qabuun Itiyoophiyaa Demokraatawaafi badhaadhomte ijaaruuf carraaqqii taasifamaa jiru keessatti yaadawwan jijjiiramaa dhiyeessuudhaan miidiyaa Daldalaa filatamaafi bu’a qabeessa ta’uudhaan tajaajiluudha.